Markaan Tabar Hayayna Talo Ma Hayn, Hadda Oo Aan Tabar Beelayna Talo Ma Hayo! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Markaan Tabar Hayayna Talo Ma Hayn, Hadda Oo Aan Tabar Beelayna Talo...
Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Madoobe /Sawir hore/Keydka HQ
Maqaal (Halqaran.com) – Wararka Kismayo la isla dhex marayo waxay sheegayaan in Axmed Madoobe xaaladdu aad ugu xuntahay, xag dhaqaale, xag siyaasadeed, xag awood ciidan, iyo xag tageero shisheeye intaba.
Waa tan koowaad e waxaa suuqa aad ugu jirta in shirkaddii KAAH oo uu saami wayn ku lahaa ay isku dhaceen isla markaana shirkaddii ay suuqa ka baxday oo la xiray xarumahii xawaaladda , KAAH bank iyo xafiisyadii oo dhan. In kastoo taasi aysan la yaab la lahayn oo Xalawaladaha soomaalidu noqdeen kuwo marka maamulku isku dhaco kallifa in shirkaddii bur-burto oo dadka hantidooda ay sidaas ku lunsadaan, xoolihii yiilna ku banaystaan sharkaddii waa burburtay.
Sidoo kale, waa istaagay ama yaraaday dhaqaalihii uu ka filayay waddamada shisheeyaha sida Imaaraatka, iyo kii ka soo gali jiray dhuxusha, dekedda, canshuurha, iyo garoonka diyaaradaha, dhaqaalahaas oo uusan awalba isaga keligii qaadan jirin ee uu la qaybsan jiray Al-shabaab, iyo ciidamada Kenya ee ka hawl gala Kismaayo.
Xagga awoodda, khudbaddiisii shalay, wuxuu isku daray calaacal iyo hanjabaad la xiriirta arrinta Gedo oo uu garawsaday inay gacantiisa ka baxaday, dhaqaale iyo ciidan uu ku difaacana uusan haysan, cid kale oo uu isku hallaynayo oo u soo gurmanaysana aysan jirin. Awalba wuxuu isku hallaynayay Kenyuu iyadiina sidii uu filayay tageero ugama helin. Sidaa awgeed awood ciidan ahaan wuxuu taagan yahay gegi cidla ah.
Waxa kale oo la sheegayaa in ku dhowaad 30 sarkaal oo ku hayb ah Axmed Madoobe ay hubkii u dhigeen markii mushaar la’aan ay ahaayeen mudo dheer, halka dowlada federalku mushaar kordhin ay ku dhawaaqday in ciidamada loo samaynayo. Soomaaliduna badanaa meeshii dhaqaale ka soo galayo bay u yaacdaa.
Si kastaba ha ahaatee haddii ciidankii uu isku hallaynayay inuu ku haysto xukunka Jubaland ay ku gadoodaan arintaasi waxay uga darnaan doontaa wax walba oo kale, waayo meel kale uu Soomaaliya dhexdeeda ku gabbado ma heli doono, inkasta oo uu Kenya ama Imaaraatka ka heli karo degaan iyo masaariifba.
Dhanka siyaasadda, cadaadis wayn oo maalinba maalinta ka dambaysa sii khordhaya baa ka haysta in mar kale dib loo qabto doorashadii lagu eedeeyay in si sharci darro ah isaga loogu doortay. Sidoo kale waxa la leeyahay muddo cayiman baa loo qabtay in lagu qabto doorasho murashixiintu oo dhan u siman yihiin oo codka doorashada ay bixinayaa xildhibaano si sax ah ay usoo xuleen oday dhaqameedyii saxda ahaa ee beelaha dega Jubaland.
Sida dadku isla dhex marayaan magaalada waxa laga dareemaya rajo wayn iyo hadal hayn dadku ku muujinayaan rajadaas oo ah in bisha December ilaa bilowga sanadka cusub maamul cusub Jubaland yeelan doonto, kadib markii la qabto doorasho loo wada dhan yahay oo si daah-furan oo cadaalad ah u dhacda.
Nin War La’ Iyo Qorismaris Maxaa Kala Qabsaday
Waxaa la yiri, nin baa reerkiisii miyiga meel dejiyay, markaas baa waxaa u yimid nin kale oo socoto ah. Ninkii socotoda ahaa baa ninkii wuxuu ku yiri: ninyahow meeshaan isaga guur waayo bahal bay leedahay laakiin ninkii reerka meesha dejiyay warkii waa diiday oo meeshiisii buu ku sii negaaday.
Habeebkii dambe ninkii socotoda (Qorismariska) ahaa intuu reerkii usoo dhacay buu wiil yar ah kala tagay. Subaxdii dambe ninkii Qorismariska ahaa baa u yimid reerkii oo ku yiri: xalay maxaad ku barideen? Kii reerka lahaa wuxuu ku jawaabay: wiil baa xalay bahal igala tagay.
Markaas baa Qorismariskii wuxuu yiri: ninyahow shalay waad talo xumayd, xalayna waad tallaabo gaabnayd, haddana waad garasho xuntahay ee meesha isaga guur.
Axmed Madoobe shalay waa talo xumaa marku cid walba ka diiday inuu si daah-furan oo loo siman yahahy u qabto doorashada, haddana waa taag daran yahay oo garab iyo gaashaan, iyo dhaqaale toona ma haysto, walina wuu garasho xun yahay oo wuxuu ku sii adkaysanayaa qaladkii uu markii hore ku dhacay oo ku fashilmay.
Wuxuu kaloo garan la’ yahay in Galmudug oo ah meel kooxo badan oo dhaqaale iyo mooryaan aad u hubaysan oo magacyo kala duwan wata ay ka hawlgalaan ay dowladdu gacanta ku dhigtay oo ku guulaysatay inay maamul u samayso inkasta oo waqti dheer, gacma maroojin badan, iyo dhaqaale badan intuba ku baxeen.
Waxa kale oo garan la’ yahay in Jubaland oo badanaa dadka degaa ay godob ka tirsanayaan Axmed Madoobe aysan jirin rabitaan badan oo loo hayo isaga iyo maamulkiisa toona sidaa awgeed ay, taageeradiisu maalinba maalinta ka sii dambaysa ay sii yaraanayso, halka taageerada dadku u hayaan dowlada federalka ah ay mar walba sii kordhayso.
Ugu dambayn, maah-maah baa waxay oranaysa: “Markaan Tabar Hayayna Talo Ma Hayn, Hadda Oo Aan Tabar Beelayna Talo Ma Hayo”
Allow Soomaaliya bed-baadi oo madaxdeeda waafaji talada wanaagsan.
W/Q: Axmed Bashir & Bros
Axmed Madoobe oo dhaqaale xumo
xag awood ciidan